सेयर बजारमा लगातार गिरावट -
काठमाडौं,असोज ४- सेयरबजारमा लगातार गिरावट आएपछि लगानीकर्ता निराश भएका छन् । भदौ २ गतेयता लगातार गिरावट आएको सेयर बजारमा एकाधबाहेकका अधिकांश कम्पनीमा नोक्सानी बेहोरेका छन् । निरन्तर बजार ओरालो लाग्दा लगानीकर्ता निराश छन् ।
सोमबार चार कम्पनीको मात्रै सेयर मूल्य बढेको छ । हालै सूचीकृत भएको मनकामना स्मार्ट लघुवित्तको मूल्य ९.९ प्रतिशतले बढेर मूल्य प्रतिकित्ता ९८९ रुपैयाँ कायम भएको छ । डिप्रोक्स लघुवित्तको मूल्य २ प्रतिशतले बढेको छ । लक्ष्मी र नयाँ सारथी लघुवित्तको मूल्य पनि सामान्य बढेको छ।
सोमबार सेयर बजारमा ११४ अंकले घटेको छ । ४ प्रतिशतको गिरावटसँगै नेप्से परिसूचक २७ सयमुनि झरेको छ । सोमबार नेप्से परिसूचक २६ सय ९८ अंक कायम हुँदा ८ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँको सेयर खरिदविक्री भएको छ । सबै समूहहरु राताम्मे भएका छन्।
कति छ सुनचाँदीको मूल्य आज ?
सुनको मूल्य २ सय रुपैयाँले बढ्यो
अमेरिकी डलरको बिक्रीदर कति?
आज सोमबार सुनको मूल्य कति?
अमेरिकी डलरको भाउ फेरि बढ्यो